Indlela yokuphucula ukusetyenziswa kwakho kweNgesi
Iilwimi Ukubhengezwa nokuXubusha
Enye yezona zinto zibalulekileyo zokufunda isiNgesi kukubiza. Ngaphandle kokubhala ngokucacileyo , kunzima ukuzenza uqondwe. Okokuqala, qalisa ngokufunda izandi zomntu ngamnye. Emva koko, gxininisa kumculo wolwimi.
Usenokumangaliswa yile ngxelo elandelayo: Ukubiza igama ngalinye kukukhokelela ekuhambeni kokubi! Ukubiza kakuhle kukuvela ekugxininiseni amagama afanelekileyo - oku kungenxa yokuba isiNgesi yilwimi elongeziweyo.
Ngamanye amazwi, amanye amagama-amagama angamaphepha - fumana ingqalelo ngakumbi, kanti amanye amagama-amagama omsebenzi - ayabalulekanga.
Ixesha elifunekayo: Uhluleka
Nantsi indlela yokuphucula ukubizwa kwakho:
Qala ngokufunda izandi ngamnye. Ezi zibizwa ngokuba ngamafonon.
Sebenzisa amabini amancinci ukuzisebenzisa izandi zombilini. Amabhanqa amancinci ngamagama apho enye isandi sitshintsha. Umzekelo, i- pop - pip - pap iguqula isandi sevoyile. Ukusebenzisa amabini amancinci kukunceda ukuhlukanisa isandi ukuba ugxininise ingqalelo kwiinguqu ezincinane phakathi kwezandi.
Funda amaqela abononisi abakhankanyiweyo nabangabonakaliyo kwaye baqhelise ngamabini amancinci. Umzekelo, f / v 'isandi' isandi kwaye i-'v' ibonisiwe. Uyakwazi ukubona umehluko phakathi kokubhaliweyo nokungabonakaliyo ngokubeka umnwe wakho emqaleni. Izandi ezivakalayo ziyaduduza, ngelixa izandi ezingabonakaliyo zingadindi. Ezi zibini ziquka: b / p - z / s - d / t - v / f - zh / sh - dj / ch.
Funda umehluko phakathi kwezikhalazo ezicocekileyo kunye ne-diphthong njenge-'ii 'isandi' kwinkwenkwe 'okanye' aee 'isandi' kwietayiti '.
Funda le mithetho elandelayo malunga nokuvakalisa.
IsiNgesi ithathwa njengelwimi oluxinekileyo ngelixa ezinye iilwimi ezininzi zibhekwa njengesilabhasi.
Kwezinye iilwimi, ezifana nesiFrentshi okanye isiTaliyane, isilwimi ngasinye sifumana ukubaluleka okulinganayo (kukho uxinzelelo, kodwa isilayidi ngasinye sinokude kwayo).
IsiNgesi sigama sigxininisa amagama athile agxininisekile ngokukhawuleza ngokubhekisele kwenye, amagama angagxininiswa.
Amagama agxininisiweyo acatshangelwa amagama anelwimi: Imimandla umzekelo, iikhikhitri, uPetros - (uninzi) izenzi eziyinhloko, ukutyelela, ukwakha - Iziganeko, ezintle, ezithakazelisayo - izalathiso isib.
Amagama angagxininiswanga acingwa ngamagama omsebenzi: Abaqingqiweyo isib., Ii-izenzi ezixhasayo, umzekelo, am, iziganeko, isib .
Funda isivakalisi esilandelayo ngokuvakalayo: Intaba entle ibonakale idlulile kude.
Funda isivakalisi esilandelayo ngokuvakalayo: Unokuza ngeCawe kuphela nje ukuba akadingeki enze nayiphi na umsebenzi wesikolo ngokuhlwa.
Phawula ukuba isivakalisi sokuqala sithatha ngexesha elifanayo ukuthetha kakuhle!
Nangona isivakalisi sesibini sisithuba esingama-30% ngaphezu kweyokuqala, izivakalisi zithatha ixesha elifanayo ukuthetha. Oku kungenxa yokuba kukho amagama amahlanu agxininiswe kwisigwebo ngasinye.
Bhala izivakalisi ezimbalwa, okanye uthathe umzekelo omfutshane izivakalisi ezivela kwincwadi okanye ukusetyenziswa.
Okokuqala gxininisa amagama agxininisekile, ngoko ufunde ngokuvakalayo ugxininise ekugxininiseni amagama agqityiweyo kunye nokunyathela amagama angagxininiswa.
Yimangalisa indlela okukhawuleza ngayo ukuthetha kwakho! Ngokugxininisa kumazwi agxininisekile, amagama angagxininiswa kunye neesilawuli zithatha ubuninzi bawo.
Xa uphulaphule izithethi zasekuhlaleni , gxininisa indlela ezo zithethi zinyamezela ngayo amagama athile kwaye uqale ukukopa oku.
Iingcebiso ezingakumbi zokuphucula ukusetyenziswa kwamagama
Khumbula ukuba amagama angagxininiswa kunye nezilwimi zivame 'zitshiywe' ngesiNgesi.
Njalo gxininisa ekumemezeni amagama agxininiswe kakuhle, amagama angagxininiswe angagxininiswa.
Musa ukugxila ekumemezeni igama ngalinye. Gxininisa amagama agxininiswe kwisigwebo ngasinye.
IsiFundo seNtetho yesiFrentshi: Ukubulisa kunye neziNgcaciso
Ukwaziswa njani ngesiFrentshi?
Ukubonakalisa ukudideka ngesiNgesi
IsiSpanish 'H': Uhlale ucebile
Ukuxininisa kunye neMpawu zeMpawu kwiSpanish
Nceda, Siyabonga, Mkelekile
Ukufumana idijithali efanelekileyo kunye nokuFunda
I-'Z 'ivakaliswe njani ngesiFrentshi?
Umzekelo woPhando lwaBasebenzi
I-Biographical Profile ye-Greek Philosopher Aristotle
Imibukiso evela kuMthi weParadesi - amaMossia aseRoma ase-Tunisia
I-Atomic Bombing yaseHiroshima neNagasaki
Imibuzo yemibuzo yoVavanyo kunye nezinto abazibuza abafundi ukuba benze
Ukufundisa izakhono zokuFunda kwiindawo zokuQinisekisa ngokuFunda
Ngaba Kukulungele Ukupaka Ngeoli Ngama-Acrylic?
2011 Ducati Monster 796 ABS Ukuhlaziywa
I-Biography: uSirtsetse Khama
Isingeniso Ukuqokelela Iincwadi Zobomi
Iintlobo ze-5 zokukhethwa
I-nitrojeni ye-Oxide ukungcola ifuthe njani kwendalo?
Iiprogram zeZiko eziMnandi zoMculo
I-Exclamation Point: Iyini na ixesha lokuyisebenzisa
Isingeniso kwi-Catfish kunye ne-Bullheads kunye neempahla zazo zeRekhodi